India: Mandrakitra An-tsarintany Ny Herisetra An-dalambe sy Mampiroborobo Tanàna Milamina · Global Voices teny Malagasy
India: Mandrakitra An-tsarintany Ny Herisetra An-dalambe sy Mampiroborobo Tanàna Milamina
Voadika ny 27 Mey 2014 22:21 GMT
Mety ho sarotra ny mahita tovovavy Indiana nahavita niala tsy iharan'ny herisetra eny an-dalana. Iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny Safecity, tolotra fandraketana an-tsarintany ifarimbonana iray, i Elsa Marie D'Silva mba “hanambarana ny tahotra”. Raha nanontaniana izy raha efa niharan'ny fanorisorenana eny an-dalana, dia hoy i D'Silva namaly, “Mbola tsy nahita tovovavy Indiana tsy niharan'ny fanorisorenana eny an-dalana aho. “nozarina handeha milamina tsy manakorontana ny ankamaroan'ireo vehivavy.
Mino tanteraka ny Safecity fa “manan-jo hiaina am-pilaminana ny vehivavy rehetra”
Mitranga foana eny an-dalamben'i India sy manerantany ny fanorisorenana eny an-dalana, ka manosika ireo fikambanana maro handray fepetra hiadiana amin'ity olana ity. Anisan'ny fikambanana ao India ohatra ny Freeze the Tease, sy ny Hollaback India. Mampiasa fomba fiasa isan-karazany ny SafeCity, tsy mangataka amin'ny olona mba hamaly ireo mpanorisory no zava-dehibe, fa ny “mamaritra” ny toerana nisian'ny tranga ao anaty sarintany
Anisan'ny Hetsika Bystander mba hahalalàna raha “te hanampy ireo lasibatra ny olona,” sary tao amin'ny pejy Facebook'ny Safecity
Ny Safecity (hita ao amin'ny Twitter sy Facebook), izay nalaina avy amin'ilay tetikasa mitovy amin'ny ao Ejipta antsoina hoe Harassmap, dia natomboka ho setrin'ny fihetsiketsehana faobe taorian'ny fanolanana nataon'andian'olona tao Delhi tamin'ny volana Desambra 2012 izay tsy malaza firy intsony ankehitriny. Ny tanjon'ireo mpamorona ny tetikasa dia ny hametraka sehatra sy fifanakalozan-kevitra hiadiana amin'ny fanorisorenana eny an-dalana ao anatin'ny fotoana maharitra. Seha-panambarana vaovao mba hanampiana hahafantarana ireo vaovao mafana ao an-tanàna izay nitranganà herisetra tsy voatitra tamin'ny vaovao ny SafeCity. Mba hananganana sehatra azo antoka hoan'ny rehetra, mangataka amin'ireo mpiserasera ny SafeCity mba “handresy ny tahotra!” amin'ny fizarana tantara, sary sy/na lahatsary ary ny tena zava-dehibe dia ny toerana nitrangan'ny herisetra.
Hatreto dia tranga maherin'ny 2700 no voatatitra. Na dia ny tranga malaza ankapobeny aza no ifantohana fa tsy ny tragan'olona manokana, miara-miasa amin'ny polisy ao amin'ny fanjakana roa ny Safecity mikasika ny fomba ahafahana mampiasa izany vaovao izany miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny polisy.
Afisy hoan'ny sekoly hita ao amin'ny habaky ny Safecity.
Mety ho fitaovam-pisorohana ihany koa ny SafeCity. Amina tranga manokana antsoina hoe ““Raharaha Shakti Mills“, niaiky ny voampanga fa nanolana vehivavy efatra tamina toerana iray izy ireo. Araka ny filazan'ny mpikarakara, midika izany fa tokony nisy fomba hafa azo natao, araka ny nolazain'i D'Silva sy Saloni hoe: «Raha nisy olona sasany nitatitra ny toerana izay faritra tena hiroboroboan'ny herisetra, mety nisy ny hetsika na fepetra isan-karazany noraisina.
Vondron'olom-pirenena manana fomba fijery mitovy izay matoky ny zo hiaina anaty fiarahamonina milamina sy azo antoka ireo mpanorina ny SafeCity. “Mino ihany koa izahay fa tokony hivezivezy tsy amin-tahotra sy lavitry ny fahoriana ny vehivavy; tsy mikajikajy izay lalana hivezivezena mba hilaminana; tsy miahiahy izay fitafy hoentina sy izay olona iarahana. “
Araka ny nosoratan'i D'Silva sy ny namany mpiara-mpanorina Saloni Malhotra tamin'ny mailaka, «manao izany ao amin'ny toerana metimety aminy ny olona miherisetra na manorisory. Manome fahatokisana azy ireo ny fahanginan'ireo niharam-boina sy ireo mpandalo ka miha-mitombo ny herisetra eny an-dalana. «Mba tsy hahatsiaro ho diso fanantenana, hoy ireo mpikarakara manontany:« Inona no azontsika atao amin'ny mahaolom-pirenena tsotra antsika mba hanova ny zavamisy? Tsy ny fiarahamonina ihany ve no nampisy ny olana tany am-boalohany? Inona no azontsika atao hitondrana fanovana? “
Pikantsarin'ny saritany Safecity
Amin'ny fananana izany saina izany, ny SafeCity dia miasa amina andiana lahatsary miresaka ny mahazava-dehibe izany hoe vehivavy mahafantatra ny fomba hiarovany ny tenany izany. Anisan'ireo torohevitra nangonin'ny SafeCity ireto manaraka ireto: aza mandeha irery, aza mandray sakafo na zava-pisotro mihitsy avy amin'ny olona tsy fantatrao, ary aleo ianao ihany no maka ny zava-pisotro hosotroinao rehefa misy fety, anisan'ireo toro-hevitra izany. Ny toro-hevitra farany ao amin'ny lisitra ankehitriny dia hoe “mampiasa boatin-tsakay na poavra atifitra.” Antenaina fa tsy haharitra intsony izany mandrapahatonga ny fotoana tsy ilàna intsony ireo lisitra ireo.
Amerika Latina 9 ora izay
Afrika Mainty 17 ora izay